Download Facetime for Windows 10 PC, Desktop & Laptop
1 Download facetime ho an'ny Windows Pc sy ny Laptop 32bit – 64kely
1.1 Fampiharana for Windows:
1.3 Ny sasany amin'ireo isan'ny mahafinaritra indrindra Features ny FaceTime
2 Requirements for FaceTime:
Download facetime ho an'ny Windows Pc sy ny Laptop 32bit – 64kely
Ampidino ny Facetime ho an'ny PCHello Facetime Andevozin'ny! Raha toa ianao ka be mpankafy ny facetime nampiasa rindrambaiko sy amin'ny iPhone sy MacBook dia atao koa ny mahita fampiharana ity eo amin'ny varavarankely PC.
Facetime for PC varavarankely 10
Facetime ho an'ny Windows 8
Facetime ho an'ny Windows 7
Facetime ho an'ny Windows laptop
télécharger Facetime ho an'ny Windows
Download facetime ho an'ny Windows 8.1
Download facetime ho an'ny Windows 7 64 kely
facetime ho an'ny Windows 7 laptop
facetime ho an'ny Windows 10 cnet
facetime ho an'ny Windows 10 pc
Toa mila manaraka ny sasany fandrika ho maka sy mametraka Facetime amin'ny Window PC.
Noho izany io lahatsoratra io dia manome fanazavana rehetra ilaina izay hampianatra ny fomba azonao atao télécharger sy hametraka facetime Non-iOS amin'ny sehatra toy ny Windows 7, 8 sy ny Window 10.
FaceTime dia iray amin'ireo malaza indrindra Apple ny lahatsary sy ny feo antso fampiharana. Taloha, olona ampiasaina hatao mifandray amin'ny tsirairay noho ny fanampian'ny nentim-paharazana finday na handsets FaceTime fa efa niova izaitsizy izany fironana. Ary ny olona dia afaka manao antso conveniently, hafatra ary na dia Video antso noho ny fanampian'ny ity fampiharana Facetime.
Ampidino ny Facetime ho an'ny PC
Izany dia mamela ny finday hatao mifandray amin'ny hafa amin'ny alalan'ny tambajotra finday na ny Wi-Fi fifandraisana. Tsy mamela ireo mpampiasa mba hanao antso lahatsary voafetra ny namany, ny fianakaviana sy ny raharaham-barotra miaraka amin'ny nanohana Contacts iPod, iPhone, iPad, Mac na Windows alalan'ny aterineto videotelephony.
Mahagaga fampiharana ity dia nihena ny lavitra eo amin'ny olona, ​​ary tena mora ho azy ny hijanona mifandray amin'ny fiainany manokana sy matihanina.
voalohany, Apple Lasa ny fangatahana ny IOS sy ny Mac OS fitaovana ary taty aoriana dia tamin'ny, noho ny lazany, izany io dia azo jerena ihany koa ho an'ny Windows.
Fa ny manana izany fampiharana eo amin'ny varavarankely ilainao-antoko fahatelo fametrahana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika dia mizara ny stepwise fametrahana izany fangatahana mba ho ampiasaina ao am-baravarankely.
Raha tianao ny hahalala misimisy kokoa momba azy io, azafady foana ny mamaky lahatsoratra. Isika koa mizara ny sasany ahalalan-javatra sy mahaliana angon-drakitra momba izany fampiharana.
Tamin'ny faran'ny lahatsoratra ity, ianao dia ho afaka hankafy ny toerana tena Facetime fampiharana eo amin'ny varavarankely.
Fampiharana for Windows:
FaceTime dia lasa iray amin'ireo lahatsary isan'ny mahafinaritra indrindra miantso fampiharana amin'ny lahatsary an-tserasera sy ny efa nanjaka telephony avy mpifaninana goavana hafa rehetra toy ny Google Duo, Skype, WhatsApp, Imo, Bingo ary ny lisitra. Ny fampiharana nohamarinina tsy hanenenana manome kalitao avo sy tsy tapaka vokatra hita maso sy feo.
Iray hafa mifaninana endri-javatra io fampiharana no manana mpampiasa-namana interface tsara. Ny hafa malefaka entana ao amin'ny tsena rindrambaiko tsy afaka ny hanome izany passante.
Zavatra antoko orinasa navoaka rindrambaiko mba ho azo tanterahina ho an'ny tsirairay mba hametraka Apple ofisialin'ny fampiharana amin'ny Windows 7 na taty aoriana. ankehitriny, azo atao ho anao ny FaceTime avy amin'ny varavarankely teo iPhone, varavarankely teo iPad, varavarankely teo Mac & varavarankely teo am-baravarankely.
Izay rehetra ilainao dia miovaova aterineto sy ny fampiharana tanteraka maimaim-poana ny vidin'ny ampiasaina amin'ny varavarankely.
FaceTime fampiharana ambony noho ny hafa rehetra videotelephony rindrambaiko araka ny voalaza etsy ambony. Images dia maranitra be sy ny famaritana avo sary dia ho firavaky ny hanolo safidy hafa rehetra hita ao amin'ny tsena an-tserasera.
Ny sasany amin'ireo isan'ny mahafinaritra indrindra Features ny FaceTime
FHD- Full Definition avo tsary no manan-danja ao amin 'ny fangatahana.
Friendly mpampiasa interface tsara mahatonga izany fifaneraserana kokoa ho an'ny mpampiasa
Usage no fomba tsy manam-petra dia afaka mifandray na aiza na aiza, ary amin'ny fotoana rehetra.
Easy ny mandamina ny fifandraisana lisitra
Favorite lisitra ny mpifandray manampy anao tonga tao anatin'ny iray tsindry
Free ny vidiny antso iray hafa miampy fotoana ny hijanona mifandray.
Group Video antso mahatonga anao ho afaka hifandray mpampiasa maro tamin'izany andro izany.
Ny SMS ihany koa azo atao ny fampiharana.
Spammers sy ny mpampiasa manan-danja azo afenina na voasakana avy amin'ny lisitra.
Ireo mpampiasa dia afaka mifandray fitaovana isan-karazany toy ny PC, Windows, iPhone, iPad, iPod, Mac.
Requirements for FaceTime:
Ireo no mahasarika toy izany fa isika mpamaky azo antoka fa ny ho tia ny hiaina ny fampiharana. Zava-dehibe ny mahatakatra ny fototra fepetra takiana alohan'ny fametrahana ny FaceTime fampiharana ho an'ny Windows. Ny fepetra fototra ahitana
Ny dikan-varavaran'ny, fara fahakeliny, tokony ho XP. Fa tsaratsara kokoa traikefa, dia tianay atolotra ve no tokony ho varavarankely & na tatỳ aoriana dikan-.
The CPU haingana dia tsy maintsy ho ambony kokoa noho 1GHz.
The ram Tokony ho kely indrindra amin'ny 2 GB na ambony.
Tokony hisy ny nanohana naorina-in fakan-tsary fa raha tsy izany antso lahatsary hahita portable nanohana fakan-tsary ho an'ny tanjona ity.
Fa teny fiantsoana, tsy maintsy manana mikrô. Privacy mpampiasa voakasika dia tokony hampiasa écouteur amin'ny naorina-in mikrô.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny manana mendrika fifandraisana aterineto.
Hitantsika teo fa ny FaceTime dia rindrambaiko ofisialy ny Apple sy ny mpandraharaha tsy mbola namoaka dikan-misy ihany no ho an'ny Windows.
Noho izany dia afaka mahazo izany afa-tsy fampiharana avy amin'ny tranonkala ofisialy in apk endrika ampiasaina ho an'ny rehetra sy ny Mac fitaovana IOS. Soa ihany ho an'i Windows, manana fandaharana sasany hita ao anaty aterineto ny fametrahana izany amin'ny alalan'ny fandaharana antoko fahatelo-.
Aoka isika hizara ny mpamaky eto tsikelikely misintona fomba fiasan'ny eto:
Android emulators no navoakan'ny antoko fahatelo-mpandraharaha mba hametraka samihafa ny format. Ireo rindrankajy fampiharana mamela anao mihazakazaka Apk endrika raki-daza ny FaceTime eo amin'ny varavarankely. Satria na dia efa napetraka amin'ny rafitra, manaraka fotsiny ny fomba. Fa ny newbies, Masìna ianao, télécharger BLUESTACKS avy amin'ny nomena rohy:
Izany no an-trano pejy ny www.bluestacks.com
Ny fomba sy ny rindrambaiko no tanteraka ka mipetraka ara-dalàna indray, ary miala sasatra.
Ny file size malalaka ny eo ho eo. 469MB Ary dia haka ny mbola any aoriana alaina hatao.
Rehefa izany dia alaina, hametraka izany ary indray mandeha no hatao, hamerina ny varavarankely.
Open bluestacks fampiharana hatrany am-boalohany sakafo. Dia ho elaela vao mba hanombohana ny voalohany sy ny tontolo iainana mifandrindra nomen'ny toerana misy anao fampiharana ny fandaharana. Aza manapaka ny dingana voalohany.
Raha vao manomboka ny fandaharana, mankany amin'ny sakafo sy ny tsindrio eo amin'ny fivarotana kilalao fampiharana.
ao amin'ny fivarotana kilalao, mahita FaceTime ao amin'ny fikarohana safidy.
Download ny fampiharana ary tsindrio eo amin'ny "Run"Mba mivantana mametraka ny fangatahana. Azonao atao koa ny afa-tsy ny Download rakitra raha tianao ny hametraka azy io tatỳ aoriana.
Rehefa vonona ny mametraka ny fangatahana amin'ny rafitra sy manaraka ny toromarika.
Nandritra ny dingana fametrahana, dia mety hahazo bitsika ho an'ny zon'ny mpandrindra na mpandrindra tenimiafina na ny fandraisana ho mpikambana. Azafady ampidiro ny teny miafina na takiana nanontany vaovao.
Farany, FaceTime no vonona ampiasaina amin'ny am-baravarankely.
mamorona anao manokana mpampiasa Id sy ny teny miafina ary toy izany koa no ampiasaina raha tianao Good.
Rehefa dia hihazakazaka ny fampiharana ny voalohany, ianao dia hahazo bitsika mba hiditra ny mpampiasa sy teny miafina Id. Rehefa efa namorona anao manokana tsy manam-paharoa sy ny mpampiasa ID tenimiafina, dia ho takiana eto bebe kokoa mihazakazaka ny fandaharana. Raha vao voalohany zavaboary tsy manam-paharoa ID dingana atao, interface tsara ny tena dia ho aseho.
Ny fifandraisana farany, miafina na voasakana dia manaiky hozakain'izy avy ny tena interface tsara. Mandehana any amin'ny tiany napetraka mba ampanjifaina azy toy ny isan-ny fepetra takiana. Toy ny iPhone, iPad, iPod & Mac, ianao koa dia afaka milalao ny fampisehoana toerana. Eto ianao tsy hanodinana ny efijery ianao nefa afaka manao fanovana sasany amin'ny misy safidy.
Raha mampiasa FaceTime voalohany, ka naniry hahafantatra bebe kokoa momba izany, dia afaka mitsidika ny fanohanany ihany koa ny tranonkala vaovao amin'ny antsipiriany ho an'ny sasany. Ny rohy omena eto ambany:
Fanatontoloana Nanampy ny olona manerana izao tontolo izao ho loza, ary fandrosoana bebe kokoa. FaceTime dia tsy momba ny hangorona ny labiera na mug ary hizara azy io ho velona amin'ny namana sy ny fianakaviana ihany.
Efa tonga nirohotra nanampy ny tsena iraisam-pirenena hijanona dia mifamatotra amin'izy samy izy.
Apple dia foana ny dikan vaovao hanafahana FaceTime ho vokatra tsara kokoa ary indrindra ny sakafo karakaraina ny fepetra mpampiasa.
Sintomy ny Joox Music App Ho an'ny Windows Windows 7/8/8.1/10 & Mac
Sintomy ny VidMix amin'ny PC For Window 7, 8 & 10
Hik-Connect Ho an'ny PC (Windows 7,8,10 & Mac)
TorrDroid – Torrent Downloader Ho an'ny PC Windows sy MAC
StarMaker Ho an'ny PC – Fampidinana maimaim-poana amin'ny Windows 7, 8, 10 & Mac
Sintomy ny GBWhatsApp Ho an'ny Windows Windows 7, 8, 10 ary Mac
Copyright © 2021 · Magazine Pro amin'ny Genesis Framework · WordPress · Hiditra